बादलमाथिको मन्दिर मुक्तिनाथ, घुम्नै पर्ने ठाउँ - CNN EXPRESS
बुधबार, २२ गते असार २०७९
बादलमाथिको मन्दिर मुक्तिनाथ, घुम्नै पर्ने ठाउँ
मुस्ताङ । हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्वीहरुको प्रशिद्ध तिर्थस्थल हो, मुक्तिनाथ मन्दिर । वराह पुराण र हिमवत्खण्ड पुराणले समेत महिमागान गरेको मुक्तिनाथ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङको काखमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर ३८ सय मिटर उचाईमा छ । उचाईमा रहेको हुँदा यसलाई बादल पारीकौ मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ । मन्दिर छेउछाउमा १०८ धारा, ज्वाला माई मन्दिर, शिवालय र गुम्बाहरू पनि छन् ।
कालीगण्डकी नदीको नजिकै पर्ने मुक्तिनाथ मन्दिरको स्थापना मध्यकालताका जुम्लाका राजाले गराएको मानिन्छ । सुन्दर प्राकृतिक दृश्वालोकन गर्दै मुक्तिनाथ पुग्दा छुट्टै आनन्दको अनुभुति गर्न सकिन्छ ।
मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जाँदा तातोपानीमा नुहाएर जाँदा उत्तम मानिन्छ । सार्वजनिक बस वा आफ्नै गाडीमा बेनी हुँदै तातो पानीसम्म पुग्न सकिन्छ । यहाँको तातो पानीमा नुहाउँदा छाला, वाथ र ग्याष्ट्रिक निको हुने विश्वास गरिन्छ ।
तातो पानी हुँदै अघि बढेपछि घाँसा पुगिन्छ । घाँसाबाट माथि पुगेपछि मार्फा गाउँ पुगिन्छ । यो अत्यन्तै सुन्दर गाउँ हो । मार्फा नेपालकै सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने ठाउँ पनि हो ।
यहाँ खान बस्नका लागि सामान्य होटलदेखि स्तरीय लजहरु समेत रहेका छन् । यहाँका होटलमा अट्याच बाथरुम सहित तातो(चिसो पानी समेत पाइन्छ ।
यहाँबाट अझै माथि लागेपछि कागवेनी पुगिन्छ । कागवेनी धार्मिक रुपमा महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ दशैं अगाडि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध गर्न जानेहरुको घुईचो लाग्ने गर्दछ ।
ड्ड यहाँ खान बस्नका लागि राम्रो सुविधा रहेको छ । तातो(चिसो पानीसहित अट्याच बाथरुम भएका लजहरु मुक्तिनाथमा रहेका छन् । मुक्तिनाथ मन्दिर चार धाममध्ये एकमा पर्छ । हिन्दू र वौद्ध धर्मको उत्कृष्ट सहिष्णुता भएको मुक्तिनाथ विश्वमै प्रशिद्ध मानिन्छ ।
ड्ड छैठौं दिन हामी मुक्तिनाथबाट जोमसोम फर्किन सकिन्छ । यहाँ हामी रात विताउन पनि सकिन्छ । त्यही दिन नै जोमसोमबाट जहाज वा बसमार्फत पोखरा फर्किन पनि सकिन्छ । जोमसोम आफैमा निकै सुन्दर ठाउँ हो । जोमसोमबाट निलगिरी र धौलागिरी हिमाल मज्जाले अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
Previous: नयाँ बर्ष काहाँ घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? घुम्नैपर्ने ठाउँ पोखरा !
Next: पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यी टिप्स तपाईंका लागि….